UJaiva Zimnike usedumisa umaskandi eGermany
UMCULI kamaskandi uMzovukile “Jaiva Zimnike” Khanyeza nozakwabo waseGermany ampike engomeni yakhe, uKarin Kedem
YIZE umculi kamaskandi, uMzovukile "Jaiva Zimnike" Khanyeza waseNquthu engakaze walibeka olwakhe eGermany kodwa umculo wakhe sewuqalile ukumakhela igama ezweni lamaJalimane.
UJaiva (34) usizwe kakhulu ukuqopha ngokuhlanganyela nentokazi emhlophe yaseGermany, uKarin Kedem, ingoma esihloko sithi Wathi Uyosebenza. Kule ngoma uJaiva ucula ngesiZulu bese uKarin ehlabelela ngolimi lwakhe lwebele. Kafushane le ngoma iqwashisa ngezintokazi ezithi ziyasebenza emadolobheni kanti ziyaqwayiza bese zihushula izisu uma kwenzeka zikhuleliswa ngamakhasimende.
Echaza uKarin, osavaleleke eGermany ngenxa yeCorona, ngalokhu kusebenza ngokubambisana noJaiva, uthe kusho lukhulu kuye ngoba sekuqalile ukumakhela ugazi emabhinceni. "Umlungu ongowakwelinye isiko amenywe ukuba azoba yingxenye yengoma kamaskandi. Ngizizwa ngithobekile kakhulu ukubamba iqhaza emculweni kaJaiva ngenxa yokuthi ngesikhathi ngiqala ukuwuzwa ngathinteka enhliziyweni." UKarin uthe leli culo abalenzanga bendawonye kodwa uJaiva ubeseGoli kanti yena ubekubo edolobheni laseKassel.
"Bekungekhona okokuqala ngiqopha noJaiva. Sake sazama ukwenza enye ingoma kamaskandi kodwa kwangahamba kahle. Yingakho ethe uma uJaiva engicela ukuba siphinde siqophe ngavumela phezulu. Ngebhadi ukuqopha kwethu kuphazanyiswe ukubheduka kwesifo seCorona emhlabeni. Ngakho angikwazanga ukuza eNingizimu Afrika. Sibe sesithatha isinqumo sokuqopha ngokwehlukana," kusho uKarin.
Uthe yize umculo kamaskandi abengawazi kodwa usijabulele isigqi nomyalezo wawo.
"Isifiso sami ukuba lo mculo welaphe imiphefumulo, ukhuthaze futhi uhlanganise abantu. Isona sifiso sami." UKarin utuse kakhulu uJaiva futhi wathembisa ukumeseka ukuze umculo wakhe ugcine ufinyelele e-Europe jikelele ngenxa yokuthi ushumayela ivangeli lobuntu. Akusiwo owokulwa nokuncintisana nabanye, okuyinto engingayithandi mina," kuphetha uKarin ovamise ukuza kuleli ngenhloso yokufukula intsha yasemakhaya.
UJaiva, okhiphe i-albhamu yakhe ngoNovemba nyakenye, ngomunye womaskandi abavumbululwa nguMgqumeni Khumalo.
Uthe kumjabulisa kakhulu ukuqopha umlando ngokuba ngumculi wokuqala kamaskandi ocula nozakwabo waseGermany nohlanganisa ulimi lwesiZulu nolwaseGermany. UJaiva waqala ukuzibandakanya nomculo ngo-2001. Emuva kokushona kukaMgqumeni, wabe esesala emaqenjini kaMgqumeni eseholwa uKhangelani Mhlongo. Wabe esehamba noKhangelani basungula Osaziwayo lapho baqopha khona ama-albhamu amathathu athi Esithenjini, Iphupho neHug 'n Kisses. Wabuye wasungula iqembu lakhe, Ama-AK 47 noJaiva Zimnike. Ema-albhamini asewaqophile kukhona ethi Imiyalo Yami, Inkosi Yomaskandi nethi Isikole Sengoma. Phakathi kwabaculi aseke wasebenza nabo kukhona uShwi Nomtekhala, Khuzani, Igcokama Elisha, Madanone, Mroza, DJ Boonu, L'vovo noDanger.